वर्षको अक्टोबर महिनाको अन्तिम दिन दु'र्लभ ‘ब्लु मुन’ देखा पर्ने ,यस्तो छ कारण ! - Prateek Nepal
यो वर्षको अक्टोबर महिनाको अन्तिम दिन ‘ब्लु मुन’ आउँदैछ। ‘ब्लु मुन’ दु’र्लभ मानिन्छ। संयोग यो वर्ष हलोइन पनि एकै दिन पर्न गएको छ।‘ब्लु मुन एक असामान्य घट ना हो । यो दुई वा तीन वर्षको समयमा देखिन्छ। तर सन् २०२० मा देखिएको जस्तै ब्लु मुन हेर्नलाई सन् २०३९ सालसम्म कुर्न पर्ने छ। नासाका अनुसार अधिकांश ब्लु मुन पहेँलो र सेतो रंगको देखिन्छन्। तर यो चन्द्रमा ती भन्दा फरक रहनेछ।
क्यालेन्डर अनुसार महिना परिवर्तन हुने बेलामा दोस्रो चन्द्रमा एकै महिनामा परेमा भौतिक गुण, आकार प्रकारमा परिवर्तन हुँदैन । यसको रंग एकै रहन्छ । कहिलेकाँहि निलो चन्द्रमा देखिनु सामान्य हो तर यसको पछाडिको कारण फरक हुन्छ। यो वायुमण्डलको परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ। यस्ता घट नाको प्रसिद्ध उदाहरण सन् १८८३ मा छ।
त्यतिबेला ज्वा’लामुखी बि’स्फोटन भएको थियो, ज्वा’लामु’खीबाट निस्किएको धुँवा हावमा मिसियो अनि चन्द्रमा निलो देखियो। खगोलीय घ टना चाहिँ चन्द्रमा निलो हुने विषयमालाई मान्दैन। खगोलशास्त्र एक महिनामा दुई पल्ट पूर्णिमा देखियो भने त्यसलाई ब्लु मुन भन्छ। नाम ब्लु मुन भनिए पनि चन्द्रमा निलो भने देखिँदैन। खगोलशास्त्री भन्छन्, ३१ अक्टोबरको रात आकाश सफा हुन्छ। त्यसैले टेलिस्कोपको मद्दतले जसले पनि चन्द्रमा हेर्न सक्छन्।
यो पनिजनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणलाई लिएर वि’वाद गर्नुको कुनै तुक नहुने बताएका छन् । उनले घुमाउरो पाराले भारतका गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरभाणेको आगामी दिनमा हुन लागेको नेपाल भ्रमणको स्वागत गरेका छन्।
बाबुराम भन्छन्, ‘तपाईंको घरमा मुसो र भि’खारी पनि आएन भने आफ्नो हैसियत बुझ्नूस् ।’ उनको यो आशय विभिन्न देशबाट हुने राजनीतिक वा अन्य भ्रमण जायज छ। उनले शक्तिराष्ट्रबाट भ्रमण नहुने हो भने नेपाल विश्वक्षेत्रीय सामरिक राडारबाटै हराउने हो कि भन्ने बताएका छन्।
को’रोना सं’क्र’मण भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेका बेला बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामले लेखेका छन्, ‘अहिले देशमा को आयो र गयो भनेर रोइलो चलिरहेको वेला मचाहिं हाम्रो देश विश्वक्षेत्रीय सामरिक राडारबाटै ह’राउने हो कि भन्ने चि’न्तामा पो छु । हाम्रो आँगन जत्रो माल्दीभ्स र रूआण्डामा शक्तिराष्ट्रका नेता ओइरिने, तर हामीकहॉ खै, तपाईंको घरमा मुसो र भिखारी पनि आएन भने आफ्नो हैसियत बुझ्नूस्।’
भिटेनलाई का’रबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र
पापीहरुले मेरी आमालाई यहीँ ढा’ले… [ भिडियो सहित ]
अब सार्वजनिक गाडीमा चढ्दा पनि फेस सिल्ड अनिवार्य- जानकारीको लागी सक्दो शेहेर गर्नुहोस
October 18, 2020 October 18, 2020 PK
आफ्नो पाखुरीमा ओलीको तस्बिर अंकित ट्या’टु खोपाउने यी युवा को हुन् ?
January 17, 2021 Ramash kunwar